Real Madrid kuma laaban karto magaalada Madrid
Real Madrid ma aysan awoodin inay dib ugu soo laabato caasimada Spain waxayna ku sugan yihiin Pamplona habeenkii seddexaad.
Los Blancos ayaa timid Pamplona xalay xilli dambe ka hor barbaraha goolal la’aanta ah ee ay shalay la galeen Osasuna, laakiin ka dib markii ay ciyaartu ku dhammaatay garoon baraf leh, kooxda ayaa ku qasbanaatay inay isla magaaladaas seexato
Ku soo noqoshada maanta Madrid ma aysan suuragalin waxaana garoomada diyaaradaha ee Madrid buux dhaafiyey baraf, safarka wuxuu ka dhigay mid aan amaan aheyn.
Cimilada Madrid ayaa la filayaa inay xumaato maalmaha soo socda, sidaa darteed Zidane iyo xiddigihiisa ayaa caawa ku xayiran Pamplona habeenkoodii saddexaad.
Real Madrid ayaa u duuli doonta Malaga tababarka maalinta Isniinta, marka ay martigeliyaan Semi-finalka Spanish Super Cup ee ay la ciyaarayaan Athletic Bilbao Khamiista.
Patrice Evra: Taageerayaasha Liverpool
Go’aanka ay Real Madrid ugu duushay Malaga ayaa dib u eegis lagu sameeyay 24-kii saac ee la soo dhaafay, waxayna ugu dambeyn go’aansadeen inay sii joogaan Malaga halkii ay sii joogi lahaayeen Pamplona oo ay isku diyaarin lahaayeen kulanka Athletic Bilbao. Khamiista.
Inkasta oo Real Madrid ay qorsheyneyso safar subaxnimada Isniinta, haddana waa inay sugaan ogolaanshaha dowladda maadaama cimilada dalku ay weli kacsan tahay.
Haddii Real Madrid ay guul ka gaarto Athletic Bilbao Khamiista, waxay u safri doontaa Sevilla finalka Spanish Super Cup ee ay la ciyaarayaan Real Sociedad iyo Barcelona, ​​oo Arbacada ku badinaya Cordoba.
Real Madrid waxay leedahay jadwal ciriiri ah bisha Janaayo, iyadoo Alcoyano uu wajahayo Copa del Rey bisha Janaayo 20 ka hor inta aysan Alaves ku kulmin La Liga 23ka Janaayo.
Tan iyo kulankii xalay ee Osasuna, Real Madrid ayaa ciyaari doonta shan kulan ka hor inta ayna ku laaban Madrid, taas oo la macno ah in ay caasimada ka maqnaan doonaan in muddo ah.
axadle 5772 posts
Chelsea iyo Man City guul weyn ayey gaareen
Tani waa haween nacas ah oo jecel haweenka: Mendy iyo gabar